गाईको मा’सु खान पाउनुपर्ने भन्दै प्रदर्शन - Nepali in Australia
October 7, 2021 autherLeaveaComment on गाईको मा’सु खान पाउनुपर्ने भन्दै प्रदर्शन
काठमाडौं । पुस्तौदेखि खाँ’दै आएको गा’ईगोरुको मा’सु खान पाउनुपर्ने माग गर्दै काठमाडौंमा प्र’दर्शन भएको छ । ‘वि’भेदकारी का’नुन खा’रेजी सं’र्घष समिति’ले काठमाडौंको माइतीघर भण्डलामा प्र’दर्शन गरेको हो ।
गाईगो’रुको मा’सु खाएको आरोपमा देशका विभिन्न स्थानबाट ना’गरिक पक्राउ गर्ने र जे’ल ह’ल्ने जस्ता घटनाहरु ब’ढेको भन्दै समितिले प्र’दर्शन गरेको हो ।नेपाल ब’हुजाति, ब’हुराष्ट्रय, ब’हुसाँस्कृतिक, ब’हुभाषिक तथा ब’हुधार्मिक देश भनेर संविधानमा उल्लेख गरिएको भएपनि
अझै ऐ’न का’नुनहरुमा वि’भेदका प्रा’वधानहरु रहेकाले गा’ईगोरुको मा’सु खाएकै कारण जे’ल जानुपर्ने अवस्था दुः’खद रहेको भन्दै समितिले यस्तो व्यवस्था खा’रेज गर्न माग गरेको छ ।‘वि’भेदकारी का’नुन खा’रेजी नै हाम्रो एक सु’त्रिय माग हो’, प्र’दर्शनका क्रममा वि’भेदकारी का’नुन खा’रेजी अभियानका
अ’भियान्ता मु’क्तान थेबाले भने, ‘आमा मान्नेले दु’ध मात्रै खालन तर हामी गाईको मा’सु पनि खान्छौं, गाई का’ट्यो भन्दै जे’ल हा’ल्ने, गोरु का’ट्यो भन्दै जे’ल हाल्ने, जा’तिय वि’भेद गर्ने उनीहरु अनि स’दभाव बि’गार्यो भनेर हामीलाई आरोप लगाउने ? यो कहाँको न्या’य हो ? उनले प्रश्न गरे ।
ध’र्मनिरपेक्ष राज्यको उ’लंघन गर्दै राज्यले नै एक धर्मलाई पक्षपोषण गरिरहेकोले आफूहरु सडकमा आउन बा’ध्य भएको प्रदर्शनकारीले बताएका छन् । वि’भेदकारी का’नुन खा’रेज नगरे र गाईको मा’सु खाएको कारण जे’लमा रहेकाहरु रि’हा नभए देशभर श’सक्त आ’न्दोलन गर्ने उनीहरुले चे’तावनी दिएका छन् ।